Kutheni le nto iShishini lakho kufuneka lisebenzise iVidiyo kwiNtengiso | Martech Zone
Kutheni le nto iShishini lakho kufuneka ulisebenzise kwiVidiyo xa uthengisa
NgoLwesibini, Septemba 15, 2020 NgoMgqibelo, uJanuwari 23, 2021 Douglas Karr
Sizilinganisile iinzame zethu zevidiyo apha eMartech kwaye bekulungile… ukuzibandakanya nzulu kwiYouTube nakumajelo asekuhlaleni nge-1 ukuya kweyesi-2 yemizuzu yokuThengisa.
Ngelishwa, kusekho ezininzi iintsomi phaya malunga neendleko kunye nomzamo ofunekayo ukuvelisa iividiyo zakho kwimizamo yokuthengisa. Eyona nto intle kunayo yonke, awudingi kusebenza kuyo yonke imiceli mingeni yetekhnoloji- kukho iindlela ezintle onokukhetha kuzo Ukubamba ividiyo yakho ngoku iyafumaneka.
Iividiyo azisetyenziswanga kakuhle, zisenza ukuba ibeyimali efanelekileyo kwinkampani yakho kuba okhuphisana nabo abayisebenzisi kodwa kunjalo ukuqhuba ukubandakanyeka okumangalisayo kunye nezibalo zokuguqula. Umboniso wevidiyo eshukumayo uyaqhubeka nokukhula njengezikrini ezintle kunye ne-bandwidth zivumela iiyure zokujonga okwenzelwe wena. Ividiyo nokuba Isicwangciso esinyanzelayo xa kufikwa kwi-imeyile… Engayixhasiyo ividiyo kodwa enokuqhuba ngakumbi ukucofa.
Ividiyo yenye yezona ndlela zisebenzayo zokubeka umyalezo wakho phambi kwabaphulaphuli. Kule infographic, jonga ukuba kutheni ividiyo isebenza, kunye nendlela yokufumana okuninzi kuyo kwintengiso yakho.
Le infographic ichaza ukuba kutheni Isicwangciso sentengiso kufuneka sisebenzise iividiyo, apho uza nezimvo khona, inkqubo yokudala ividiyo, indlela yokuyihambisa, yintoni esebenza kakuhle, kunye neengcebiso ezongezelelweyo.
tags: Inkqubo yokudala ividiyoukuhanjiswa kwevidiyoizimvo zokuthengisa ividiyoiingcebiso zevidiyokutheni usebenzisa iividiyoKutheni intengiso yevidiyo
IMediafly: Ukuphela kokuGqitywa kokuXhotyiswa koLawulo kunye noMxholo woLawulo